पर्सी बाइशे शेली। उनको जन्मदिनको लागि short छोटो कविताहरू। | वर्तमान साहित्य
आज, अगस्त,, को एक नयाँ वार्षिकोत्सव मनाउँछ जन्म अ poet्ग्रेजी कविको पर्सी बाइशे शेली। र ठ्याक्कै यस वर्ष यो द्विवार्षिक को प्रकाशन को Frankenstein, आफ्नो श्रीमती को मेरी शेली। यो दम्पती यूरोपीय साहित्यकार रोमान्टिकवादको मौलिक भिन्नता हो। उसको सम्झनामा, म रोज्छु यी कविताहरु यो याद गर्न।
1 पर्सी बाइशे शेली
2 रोजिएका कविताहरू
2.1 प्रेम, सम्मान, ट्रस्ट
2.2 सानो छँदा, म भूतहरू खोज्दै थिएँ
2.3 मलाई तिम्रो चुम्बन डर छ
2.4 परिक्षाबाट आयो
2.5 जब नरम आवाजहरू मर्दछन्
2.6 प्रेमको दर्शन
पर्सी बाइशे शेली
ऊ फिल्ड प्लेस, ई England्गल्यान्डमा जन्म भएको थियो 1792। धेरै धनी परिवारबाट, उनले प्रतिष्ठित कलेजमा अध्ययन गरे इटन र त्यसपछि युनिभर्सिटी कलेजको अक्सफोर्ड। हकदार हकदार प्रकाशित गरेको कारण उनलाई त्यहाँबाट निकालियो नास्तिकताको आवश्यकता। जब म आइपुग्छु लन्डन, एक १-वर्षीया केटी संग प्रेम भयो, Harriet वेस्टब्रुक, जससँग उनी भागे र विवाह गरे। ऊ योर्क, आयरल्याण्ड र वेल्समा बस्दै थियो। त्यहाँ उनले आफ्नो पहिलो प्रमुख कविता लेखेका थिए रानी Mab।
ह्यारिएटको विवाह टु .्गियो, उनले आत्महत्या गरे र शेलेले उनीका दुई बच्चाको अभिभावक गुमाइन। त्यसपछि ऊ बिरामी भयो क्षयरोगका उनी १ 1818१XNUMX मा इटालीको लागि प्रस्थान गरे। उनको भेट भइसकेको थियो मेरी वोलस्टोन क्राफ्ट, दार्शनिक विलियम गोडविनकी छोरी, र उनी पनि भागेकी थिइन्।
तिनीहरू मिलान, भेनिस, नेपल्स र फ्लोरेन्समा बस्थे। यो उनको जीवनको अन्तिम चार बर्षको अवधिमा थियो जुन उनले लेखेका थिए मास्टरपीस: लिरिकल नाटक प्रोमिथियस स्वतन्त्र गरियो, त्रासदी सेन्सी, विभिन्न लय कविताहरू जस्तै पश्चिम वायुको लागि ओड, Or एक lark गर्न o मिमोसा, र एलिजी पनि एडोनाइस, जोन कीट्सको मृत्यु पछि प्रेरित।
शेली हो एक अग्रणी अ Ro्ग्रेजी रोमान्टिक कवि, जोन किट्स र लर्ड बायरन संग, तपाइँको साथीहरु। आफ्नो काम मा, आदर्शवाद र मानवता को भविष्य मा विश्वास, तर यो संग संक्रमित छ उदासी.
यी उनका छोटो कविताहरू हुन्, उनका सबै कविताहरूको सारको सटीक उदाहरण।
प्रेम, सम्मान, ट्रस्ट
प्रेम, आदर, ट्रस्ट, बादल जस्तो
तिनीहरू छोडेर फर्कन्छन्, एक दिनको .ण।
यदि अमर मानिस, सर्वशक्तिमान,
तपाईं-ignoto र उदात्त तपाईं हुनुहुन्छ रूपमा-
तपाईं आफ्नो आत्मालाई मा आफ्नो दल छोड्ने थियो।
तपाईं, स्नेह को दूत,
कि तपाईं प्रेमीको आँखामा बढ्न;
तपाईं शुद्ध विचार पोषण गर्ने
मर्न लागेको ज्वालामा कस्तो उदास!
नछोड्नुहोस् जब तपाईंको छाया अन्तमा आउँछ:
तपाई बिना जीवन र डर जस्ता
चिहान अँध्यारो वास्तविकता हो।
सानो छँदा, म भूतहरू खोज्दै थिएँ
शान्त कोठा, गुफाहरू, भग्नावशेषहरूमा
र तारांकित वन; मेरो डरलाग्दो कदमहरू
तिनीहरू मरेकाहरूसँग कुराकानी गर्न चाहन्थे।
उनले ती नामहरू भने जुन अन्धविश्वास हो
instills। त्यो खोजी व्यर्थ भयो।
मैले अर्थलाई सोचे जस्तो
जीवनको, हावाको छालाको समयमा
कति जीवन र fecund
नयाँ चरा र बोटबिरुवा,
अचानक तिम्रो छाया ममाथि आयो।
मेरो घाँटीले एक्स्टेसीको चिच्याहट गरोस्।
मलाई तिम्रो चुम्बन डर छ
१ 1820२० मा लेखिएको, यो मरणोत्तर १ 1824२XNUMX मा प्रकाशित भयो।
मलाई तपाईको चुम्बनहरू डर लाग्छ, कोमल कन्या।
तपाईं मेरो डर गर्न आवश्यक छैन;
मेरो आत्मा शून्य मा अभिभूत,
यो तपाइँको सताउन सक्दैन।
म तपाईंको असर, तपाईंको इशारा, तपाईंको कारण डराउँछु।
भक्ति र अर्थ निर्दोष छ
ती मानिसहरूसँग जुन मेरो हृदयले तपाईंलाई प्रेम गर्छ।
यो १ 1839 XNUMX ant को मानवविज्ञानमा मरणोत्तर प्रकाशित भएको थियो, काव्यात्मक कार्यहरू, मेरी शेली द्वारा संपादित।
म त्यो मद्यमा मात्तिएँ
चन्द्र कोकुनको कि परिक्षाहरू
Hyacith चश्मा मा संकलित:
डोर्महाउस, चमगादुर र मोलहरू
तिनीहरू खोलाहरूमा वा घाँसमा सुते,
महलको सुनसान र दु: खी आंगनमा;
जब दाखमद्य गर्मी भूमि मा फैलियो
वा शीतको बीचमा यसको बाफहरू बढ्छन्,
उनीहरूको खुशीको सपनाहरुमा खुशी छ
तिनीहरू निदाइरहेका छन् अनि तिनीहरू आनन्दित छन्। खैर तिनीहरू थोरै छन्
परियोंहरू जुन ती नयाँ चेसहरू बोक्दछन्।
जब नरम आवाजहरू मर्दछन्
यो सम्भवतः छ सबै भन्दा राम्रो मध्ये एक र यो पनि रोमान्टिकवाद को एक सबैभन्दा प्रतिनिधि को रूप मा मानिन्छ। केहि तथ्यहरु र संवेदनाहरु बिर्सिएको छैन को शाश्वत अभिव्यक्ति र समय को पारित बावजुद स्मृति र हृदय मा अक्षुण्ण रहन।
उसको संगीत अझै स्मृतिमा कम्पन हुन्छ;
जब मीठो बैंगनी बिरामी हुन्छन्,
यसको सुगन्ध इन्द्रियमा रहन्छ।
गुलाबको पातहरू, जब गुलाब मर्दछ,
तिनीहरू प्रेमीको ओछ्यानमा ढेरिएका छन्;
र त्यस्तै तपाईंको विचारहरूमा, जब तपाईं जानुहुन्छ
प्रेम आफैं सुत्नेछ।
यो १ 1820२० मा पनि लेखिएको थियो र यसमा प्रकाशित गरियो नृविज्ञान १1866 बाट: पर्सी बाइशे शेले द्वारा चयनित कविताहरू।
झरनाहरू नदीसँग मिल्छ,
समुद्र र नदहरु;
स्वर्गको हावा सदाको लागि मिश्रित हुन्छ,
एक मीठो भावना संग;
संसारमा कुनै पनि कुरा अनौंठो छैन
ईश्वरीय कानून द्वारा सबै चीजहरू
तिनीहरू एक अर्कालाई पूर्ण गर्छन्:
किन म यो तपाईं संग गर्नु हुँदैन?
पहाडहरूले उच्च आकाशलाई चुम्बन गरे
छालहरूले डु on्गालाई किनारमा छोड्छ।
कुनै फूल सुन्दर हुनेछैन
यदि तपाईंले आफ्ना भाइबहिनीहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ भने:
र सूर्यको किरणले पृथ्वीलाई माया गर्छ,
र चन्द्रमाको प्रतिबिम्बले समुद्रलाई चुम्बन गर्दछ:
यो सबै प्रेम मूल्य के हो
यदि तिमी मलाई चुम्बन गर्दैनौ भने?
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कविता » पर्सी बाइशे शेली। उनको जन्मदिनको लागि short छोटो कविताहरू।